किन आउँछ डंडीफोर ? यस्तो छ, सजिलै डन्डिफोर हटाउने घरेलु उपाय !
काठमाडौँ – छालामा उत्पन्न हुने समस्या मध्य एक हो डन्डिफोर । डन्डिफोरले मानिसको सुन्दरतामा कमी ल्याउनुका साथै छालासम्बन्धी अन्य विभिन्न समस्या पनि निम्त्याउने काम गरिरहेको हुन्छ। जसका कारण मानिसहरु डन्डिफोर आउन नदिन विभिन्न सावधानी अपनाइरहेका हुन्छन्। यो अत्यन्तै जरुरी पनि हुन्छ। डन्डिफोरबाट बच्नका लागि विभिन्न सावधानी अपनाउदा अपनाउदै पनि कहिले काही डन्डिफोर आउने गर्दछ। त्यसकारण डन्डिफोरको समस्या हुनेले व्यक्तिले एक दिनमा तीन पटक अनुहार राम्रोसँग सफा गर्नुपर्छ। यदि अनुहार सफा भयो भने अनुहारका कोषहरूमा ऊर्जा पुग्छ। आफ्नो छाला अनुसारको फेसवास प्रयोग गर्नु पर्दछ। गुलाब, स्याउबाट बनेका प्राकृतिक फेसवासको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
धुलो धूँवा, प्रदूषणको सोझो असर हाम्रो अनुहारको छालामा पर्छ । अनुहार रुखो, फुस्रो हुने, चाहुरिने, चाया पोतो आउने बाह्य कारण पनि यिनै हुन् । खासगरी किशोरवयमा अनुहारमा डन्डिफोर आउने समस्या बढी हुन्छ । यसको दाग रहने भएकाले अनुहारको सौन्दर्य फिका बनाइदिन्छ । हाम्रो छालामा स-सना रोम-छिद्र हुन्छ । त्यही तेल ग्रन्थी ब्याक्टेरियाले ग्रस्त हुन्छ । र, स-सना फोका उठ्ने, घाउ बन्ने हुन्छ । यस्तो समस्या तैलिया छाला भएकाहरुमा बढी देखिन्छ । यद्यपी कतिपयमा भने तैलिया छाला नभएपनि डन्डिफोर आउन सक्छ ।
नियमित छाला सफा गर्दा अनुहारमा रहेका धुलोका कणलाई हटाउने काम गर्दछ। अनुहार सफा गर्ने नाममा बारम्बार सफा गर्नुका साथै धोट्ने काम गर्नु हुँदैन। जसले गर्दा अनुहार फुस्रो हुनुका साथै अनुहारमा रातो डाबर आउने गर्दछ। डन्डिफोर कम गर्न नियमित रूपमा पर्याप्त पानी पिउँन अति नै महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण प्रयाप्त मात्रामा पानी पिउने बानी बसाल्नुपर्छ।
यदि डन्डिफोर आएको छ भने त्यसलाई घरीघरी हातले छुनुहुँदैन। हात फोहोर भएको खण्डमा संक्रमण बढाउने सम्भावना धेरै हुन्छ। धेरै डन्डिफोर आउने व्यक्तिहरुले चिल्लो पिरो, अमिलो खाने कुराहरुबाट टाढै बस्नु उपयुक्त हुन्छ। यद्यपि डन्डिफोरले अस्वभाविक रुप देखाएर दुःख दिन थालेको खण्डमा छाला विशेषज्ञलाई देखाई उपचार गर्नु पर्दछ ।
तेल ग्रन्थीले तेलको अधिक उत्सर्जन गर्दा छालाको रोमछिद्र बन्द हुनुपर्छ र डन्डिफोर आउँछ । शारीरिक र हार्मोनल परिवर्तनले पनि अधिक तेल उत्पादनमा भूमिका खेल्छ । केहि दुधजन्य उत्पादनमा उच्च मात्रामा क्याल्सियम र चिनी पाइन्छ, जसले डन्डिफोरलाई बढाव दिन्छ । एस्ट्रोजेनयुक्त औषधी पनि डन्डिफोरको कारण हो । मेकअपका लागि प्रयोग गरिने सौन्दर्य प्रसाधनमा रहेको रसायन सहि ढंगले पखालिएन भने त्यसले समेत डन्डिफोर निम्त्याउँछ ।
के छ घरेलु उपचार विधि :
अनुहारको सौन्दर्यका लागि मेकअप वा उपचारले मात्र पुग्दैन । खासमा पेट सफा राख्नुपर्छ । रगतको शुद्धिकरण गर्नुपर्छ । यसमा लागि स्वस्थ्य खानपान आवश्यक हुन्छ । पर्याप्त पानी वा झोलयुक्त पदार्थ सेवन गर्ने, फाइबरयुक्त खानेकुरा खाने, सलाद, फलफूलको सेवन बढाउने । साथै चिल्लो, चाप्लो, मसलेदार, अमिलो, पीरो खानेकुरा छालाको सौन्दर्यका लागि अनुकुल हुँदैन ।